Posterior Pituitary Ọgwụ - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Posterior Pituitary Ọgwụ Posterior Pituitary bụ ihe niile na-eke ngwaahịa na-akwadebe site mmanụ si ezi pituitary gland. [Description] Ngwaahịa a bụ a colorless uzo ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta uzo mmiri mmiri. [Function na ojiji] Ngwaahịa a nwere oxytocin na pitressin. Oxytocin pụrụ inye nsọpụrụ uteruses bibiri ma na-ewusi mkpi nke eriri akpa nwa ezigbo uru. Ya mmetụta nke na-akpali akpali eriri akpa nwa ezigbo uru dịgasị dị ka doses na hormone etoju ke vivo. A obere dose o ...
Posterior Pituitary bụ ihe niile-eke ngwaahịa na-akwadebe site mmanụ si ezi pituitary gland.
Ngwaahịa a bụ a colorless uzo ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta uzo mmiri mmiri.
Ngwaahịa a nwere oxytocin na pitressin. Oxytocin pụrụ inye nsọpụrụ uteruses bibiri ma na-ewusi mkpi nke eriri akpa nwa ezigbo uru. Ya mmetụta nke na-akpali akpali eriri akpa nwa ezigbo uru dịgasị dị ka doses na hormone etoju ke vivo. A obere dose nke ngwaahịa a nwere ike welie rhythmic contractions nke eriri akpa nwa uru na edo mkpi na-atụrụ n'oge oge ime; nnukwu doses nke ngwaahịa ga-eme ka tetanic mkpi nke eriri akpa nwa ezigbo uru na pịa ọbara arịa na myometrium-akpa hemostatic mmetụta. Ke adianade do, oxytocin nwere ike kwalite mkpi nke myoepithelial mkpụrụ ndụ gburugburu mammary acini na mammary ducts, Ọrụ ejection nke mmiri ara ehi. Pitressin nwere mmetụta nke antidiuresis na elu ọbara mgbali. Ọ na tumadi etinyere na:
1. ọbara aghara nke mmiri ara ehi ejection, mammary ọzịza, ma na-akwalite lactation maka ọhụrụ nye nwanyi ụmụ anụmanụ na-enweghị mmiri ara ehi; mmiri ara ehi nwere ike ejected 1-4 awa mgbe ogwu ogbugba.
2. mere ngwa ngwa parturition na odinopoeia.
3. Hemostasis maka ehi 'oke hemorrhage.
4. ọbara eriri akpa nwa ọbara ọgbụgba ma na-ejigide nwa ebu n'afọ na membranes.
1. ọbara aghara nke mmiri ara ehi ejection, mammary ọzịza, ma na-akwalite lactation maka ọhụrụ nye nwanyi ụmụ anụmanụ na-enweghị mmiri ara ehi: a otu dose maka intramuscular injection: 20-40 nkeji tozuru okè ịnyịnya na ehi, otu ugboro n'ụbọchị 3 consecutive ụbọchị; 10-20 nkeji tozuru okè atụrụ na ezi, otu ugboro n'ụbọchị 3 consecutive ụbọchị; 5-10 nkeji nkịta, nwamba, nkịta ọhịa, racoon-nkịta na minks, otu ugboro n'ụbọchị 3 consecutive ụbọchị.
2. mere ngwa ngwa parturition na odinopoeia: a otu dose maka subcutaneous injection ma ọ bụ intramuscular ogwu ogbugba: 30-100 nkeji nke inyinya na ehi; 10-50 nkeji atụrụ na ezì; 2-10 nkeji nkịta; 2-5 nkeji nwamba.
3. Hemostasis maka ehi 'oke hemorrhage: igba ogwu n'akwara ọgwụ; 100-150 nkeji maka otu dose (atụkwasịkwara 500ml nke glucose ma ọ bụ sodium chloride injection).
4. ọbara eriri akpa nwa ọbara ọgbụgba ma na-ejigide nwa ebu n'afọ na membranes: a otu dose maka subcutaneous injection ma ọ bụ intramuscular ogwu ogbugba: 30-100 nkeji nke inyinya na ehi; 10-50 nkeji atụrụ na ezì; 2-10 nkeji nkịta; 2-5 nkeji nwamba.
[Oghom Mmeghachi omume]
1. Contraindicated nso n'oge nke oru na ọmụmụ kanaal nhata, ndiiche nwa ebu n'afọ na ọnọdụ, ma na-emeghe cervixes.
2. High doses nwere ike ime ka ịdị elu nke ọbara mgbali, oliguria na abdominal mgbu.
10 x 1ml: 10 nkeji
Shaded na echekwara na a gbara ọchịchịrị na jụụ ebe (n'okpuru okpomọkụ nke 20 ℃).
Previous: Pituitary Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ maka Ọgwụ (LH)
Osote: Ime Mare ọbara Gonadotropin maka Ọgwụ (PMSG)
Cloprostenol sodium Ọgwụ (D ụdị Ntuziaka Nne na Nna)